May « 2010 « Hamrosyangja.com :: syangja and waling bazaar latest news, people, photos and more.
ट्याङकरको ठक्करबाट एकको मृत्यु
जेठ २, तनहुँ
दुध लिन पोखराबाट आँबुखैरेनीतर्फ जादैँ गरेको ग.१.क. १४१० नम्बरको दुध ट्याङकरले ठक्कर दिदाँ शनिवार राती तनहुँको आँबु-३, मार्कीचोकका ४५ वर्षीयसन्त बहादुर अधिकारीको मृत्यु भएको छ।
पृथ्वी राजमार्ग अर्न्तगत आँबु-डुम्रे सडक खण्डको मार्कीचोकमा पैदल यात्रा गरिरहदाँ ट्याङकरको ठक्करवाट घाइते भएका अधिकारीलाई उपचारका लागि डुम्रे स्थित लक्ष्मी अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो।
ठक्करपछि ट्याङकर पल्टिदाँ ट्याङकरमा यात्रारत ४ जना घाइते भएका छन्। घाइते सबैको आँबुखैरेनी स्थित स्थानीय मेडिकलमा उपचार भईरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, आँबुले जनाएको छ।
घटनाको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले अबरुद्ध पारेको पृथ्वी राजमार्ग प्रहरीले बल प्रयोग गरेर एक घण्टापछि खुलाएका थिए।
कुचो उद्योगमा आगलागी, ३५ लाखको क्षति
झापा, वैशाख २७
धुलाबारी स्थित एउटा कुचो उद्योगमा आइतवार राती आगलागी हुँदा लाखौं मुल्यको कुचो जलेर नष्ट भएको छ। रञ्जिता कुचो उद्योगमा भएको आगलागीबाट ३५ लाख बराबरको क्षती भएको प्रोप्राइटर किशन शाहले बताए।
उनका अनुसार राती एघार बजे शुरु भएको आगलागी विहान पाँच बजे मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो। भद्रपुर नगरपालिकाको दमकल र स्थानीयवासीले आगो निभाएका थिए। भारत निर्यात गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको कुचोमा नियोजित रुपमा आगो लगाइएको हुनसक्ने प्रोप्राइटर शाहले आशंका गरेका छन्। तर कसले लगायो भन्नेचाहिँ उनले खुलाएनन्।